कपिलवस्तुका थप १० कोरोना सङ्क्रमित भारतको मुम्बईबाट लुकेर नेपाल छिरेका थिए ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कपिलवस्तुका थप १० कोरोना सङ्क्रमित भारतको मुम्बईबाट लुकेर नेपाल छिरेका थिए !
कपिलवस्तुका थप १० कोरोना सङ्क्रमित भारतको मुम्बईबाट लुकेर नेपाल छिरेका थिए !
बैशाख २९ गते, २०७७ - १२:४१
कपिलवस्तु । भारतबाट आएका थप १० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कपिलवस्तुमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५ पुगेको छ ।
बुद्धभूमि– ७ मानपुर र वडा नं १० धनकौलीका एक÷एक जना युवकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य संयोजक डोलविक्रम बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । गोरुसिङ्गेस्थित गौतमबुद्ध बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा रहेका १२५ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा दुई जनामा कोरोना देखिएको हो । गोरुसिङ्गेको क्वारेन्टाइनमा २१६ जना रहेको संयोजक बेल्वासेले बताए।
बैशाख २९ गते, २०७७ - १२:४१ मा प्रकाशित